Zithini izibonelelo kunye ne-ROI yokuSebenzisa iiNjini zokuKhangela? | Martech Zone
NgoMgqibelo, nge-25 kaFebruwari ngo-2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Njengoko bendijonga amanqaku amadala endiwabhalileyo ekusebenziseni injini yokukhangela; Ndifumanise ukuba ngoku ibingaphaya kweminyaka elishumi bendihambisa umkhombandlela. Ukuphuculwa kweinjini yokukhangela kuye kwenyuka kwincopho yayo kwiminyaka embalwa edlulileyo, ishishini elinamawaka ezigidi ezathi zaphakama kodwa emva koko zawa kubabalo. Ngelixa abacebisi be-SEO bekho kuyo yonke indawo, uninzi lwalukhokela abathengi babo kwindlela ethandabuzekayo apho babedlala khona injini yokukhangela kunokuyisebenzisa ngokufanelekileyo.
Ndade ndawubhala umgangatho, inqaku le-cliché, ukuba I-SEO ibifile kukothuka kwabo bakushishino lwam. Ayikuko ukuba ndandicinga ukuba iinjinjini zokukhangela zifile, ziyaqhubeka nokwanda ngokubaluleka kunye nefuthe kwizicwangciso zentengiso zedijithali. Yinto yokuba ishishini belifile, belahlekile. Bayekile ukugxila kwintengiso kwaye, endaweni yoko, bajolise kwii-algorithms kwaye bazama ukukopela indlela yabo ephezulu.
Yonke imihla, ndifumana izicelo zokucela, ukucenga, okanye ukufuna ukuhlawula i-backlinks. Kuyaphazamisa kuba oko kubonisa ukungabikho kwentlonipho kuluntu endikhe ndalusebenzela ukwakha ixabiso kunye nentembelo kule minyaka ilishumi idlulileyo. Andizukubeka umngcipheko kwinqanaba lomntu.
Oko akuthethi ukuba andizikhathazi ngokugcina indawo yam ilungiselelwe iinjini zokukhangela okanye ezo zabathengi bam. Ukusebenza kweinjini yokukhangela kuyaqhubeka nokuba sisiseko sayo yonke imizamo yethu nabathengi bethu, abakhulu nabancinci.
UHarris Myers wenze le infographic, I-SEO: Kutheni iShishini lakho liyifuna ngoku?, Oku kubandakanya izizathu ezintandathu zokuba kutheni lonke ishishini kufuneka libe nesicwangciso sokukhangela izinto eziphilayo.
Amava akwi-Intanethi aqala ngokukhangela - Iipesenti ezingama-93 zabathengi banamhlanje basebenzise injini yokukhangela ukukhangela iimveliso kunye neenkonzo
I-SEO ibiza kakhulu I-82% yabathengisi ibona i-SEO ngokusebenza ngakumbi, nge-42% ibona ukunyuka okubalulekileyo
I-SEO ivelisa ukugcwala okuphezulu kunye namazinga aphezulu okuguqula -I-3 yezigidigidi zabantu zikhangela i-Intanethi yonke imihla kunye namagama aphambili aqhuba ngokuhambelana kakhulu, ekujoliswe kuko ekujoliseni.
I-SEO yinto eqhelekileyo kukhuphiswano namhlanje Isikhundla asisiyo nje isalathiso se-comapny's SEO, sisalathiso segunya lakho elipheleleyo kumzi mveliso wakho.
I-SEO ibonelela kwintengiso eshukumayo -I-50% yokukhangela okukukhokelela kutyelelo kwivenkile
I-SEO ihlala itshintsha kwaye kunjalo namathuba ayo -Iinjini zokukhangela ziyaqhubeka nokuphucula ubuchule bazo kunye nokuzenzela kunye neziphumo ezilungiselelwe ukonyusa amava abathengi. I-SEO ayisiyonto do, ifuna ingqalelo eqhubekayo yokujonga zombini utshintsho lweinjini yokukhangela kunye neenzame ezivela kubaqulisi bakho.
Into yokuqala ekufuneka uyikhumbule malunga nembuyekezo kutyalo-mali lwe-SEO kukuba iya kutshintsha ngokuhamba kwexesha. Ukuba uqhubeka nokwandisa kwaye uvelisa umxholo omangalisayo, imbuyekezo kutyalo-mali iya kunyuka ngokuhamba kwexesha. Njengomzekelo, uvelisa i-infographic kwikota enokhuphiswano kwaye utyalomali yi- $ 10,000 kuphando, uyilo kunye nokunyusa. Kwinyanga yokuqala, uqhuba eli phulo kwaye ufumane izikhokelo ezimbalwa kwaye mhlawumbi nokuba lunye uguquko ngexabiso le- $ 1,000 yenzuzo. I-ROI yakho ijonge ezantsi.
Kodwa iphulo alikafezekisi eyona mbuyekezo yalo. Kwinyanga yesibini neyesithathu, i-infographic ifakwe kwiwebhusayithi ezininzi ezinegunya eliphezulu kwaye ipapashwa kwisibini. Ikhredithi enokubangela inyusa igunya lesiza sakho ngesihloko kwaye uqala ukubeka kwinqanaba eliphezulu kumagama aphambili kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. I-infographic kunye namaphepha ahambelana nayo okanye amanqaku aqala ukufumana amakhulu ekhokelo ngamaninzi okuvalwa inyanga nenyanga. Ngoku ubona i-ROI elungileyo. Le ROI inokuqhubeka nokwanda kule minyaka imbalwa izayo.
Sine-infographic enye yomthengi eqhubeka nokufumana ingqalelo kwiminyaka esixhenxe emva kokuyipapasha kuqala! Ungayichazanga eyokuba sisebenzise umxholo wentengiso kunye namanye amanyathelo. I-ROI kuloo infographic ngoku ikumawaka!
tags: izibonelelo ze seouphando lwezinto eziphilayoUhlobo lokukhangela eziphilayoSEOIziboneleloinyoka